Soosaarayaasha Shiinaha ee loo yaqaan 'Flange nuts nuts' iyo kuwa wax iibiya | Jiuhe
Noocan Hexagon Flange Nut waxaa sidoo kale loo yaqaan pad nut, ubax - nuts nuts, flange nuts iyo wixii la mid ah. Waxaa badanaa loo isticmaalaa isku xirka tuubbada ama gogosha shaqada oo u baahan in la kordhiyo dusha sare ee lowska. Waxay ka kooban tahay shey qaali ah oo leh shaqo fiican. Waa xawaare dhejis ah oo leh dunta gudaha waxaana loo istcimaalay xirmooyinka, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa qayb farsamo ahaan loo adeegsado iskudhiska si ay ugu gudbiso dhaqdhaqaaqa ama awooda. Intaa waxaa sii dheer, Hexagon Flange Nut wuxuu leeyahay faa'iidooyinka cajiibka ah ee tayada sare leh, nolosha adeegga dheer, saxnaanta sare, xirashada iska caabbinta, iska caabinta daxalka, qaab dhismeedka istiraatiijiga ah, naqshadeynta jilicsan, qiime hooseeya iyo waliba qiimo sare oo wax ku ool ah. Sidoo kale waa loo dejin karaa iyadoo la raacayo shuruudaha macaamiisha kaladuwan. Waxa taas ka sii daran, asal ahaan waa isku mid iyo xajmi balaaran sida xawaaraha hexagon, laakiin marka la barbardhigo guud ahaan hilibka loo yaqaan 'hexagon nut,' waa gogo 'hal-go' ah iyo lowska, waxayna leedahay qaabab ilkeed oo ka soo horjeeda salka hoose, taas oo kordhisa xiriirka dusha sare ee aagga ee lowska iyo gabal shaqada. Sidaa darteed, xiisaddu way ka xoog badan tahay isku darka nafaqada caadiga ah iyo qashinka. Hexagon Flange Nut aad ayuu caan ugu yahay macaamiisheena adduunka oo dhan.
Hexagon flange nuts: Aqoonta aasaasiga ah ee loo yaqaan 'flange nuts' waa sida soo socota: flange nuts waxay leedahay bir, sidoo kale waxay leedahay bir aan la taaban karin.But bir ayaa badanaa la isticmaalaa. Laakiin sidoo kale marka loo eego macaamiilku wuxuu u baahan yahay daaweyn midabaynta. non-ilaalinta deegaanka.Electroplating waxay leedahay zinc midab ilaalinta deegaanka, nafaqeeyaha ilaalinta deegaanka, zinc ilaalinta bulukeetiga, zinc ilaalinta deegaanka iyo wixii la mid ah, sidoo kale waxay leedahay elektarooni guud, zinc cad, zinc midab, zinc madow, nikolo cad iyo wixii la mid ah.
Sharaxaadda xargaha (d) M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20
Booqasho Jumbaha adag 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5
Xaqiiqada1 / / 1 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5
Thread wanaagsan / / / 1 1.25 / / /
c ugu yar 1 1.1 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 3
DC ugu badnaan 11.8 14.2 17.9 21.8 26 29.9 34.5 42.8
e ugu yar 8.79 11.05 14.38 16.64 20.03 23.36 26.75 32.95
k ugu badnaan 5 6 8 10 12 14 16 20
ugu yar 4.7 5.7 7.6 9.6 11.6 13.3 15.3 18.9
s ugu badnaan 8 10 13 15 18 21 24 30
ugu yar 7.78 9.78 12.73 14.73 17.73 20.67 23.67 29.67
Waxyaabaha Kaarboon Kaarboon
Dusha sare Sinta oo caddaan ah
Cabbirka M4-M24 & Aqbala Habeeysan
1.OEM, naqshadeeyaha iibsadaha, adeegyada sumadaha iibiyaha la bixiyay.
2. Xal u gaar ah oo khaas ah ayaa macaamiisheenna siin kara injineero si wanaagsan u tababaran oo shaqaale ah.
3.Waxaan ku siin karnaa muunad bilaash ah jeegaaga.
hexagon serretated lowska lowska
Hore: Hex nut
Xiga: Quudhida laba jibaaran